Ilaha wabiga Mundo, waa dhacdo dabiici ah oo cajiib ah | Wararka Safarka
Isha wabiga Mundo waa mid ka mid ah ifafaalaha dabiiciga ee ugu quruxda badan gobolka Albacete. Markaad fiiriso, waxaad u maleyn kartaa inaad kujirto biyo-dhac Hawaii. Si kastaba ha noqotee, waxaad ku jirtaa Xadka buuraha Alcaraz, mid ka mid ah kuwa ka kooban Baaxadda buurta prebetic.
Webiga Mundo waa qayb ka mid ah Segura, oo ay ku biirto ka dib markay hesho, markeeda, webiyada isku dhac iyo kuwa Vega de Riopar. Laakiin marka hore, waxay qaadataa dalxiis ka gudba dhowr magaalo, mid walbana ka qurux iyo taariikh badan. Si kastaba ha noqotee, ma dooneyno inaan sii odoroso. Aynu ka bilowno isha wabiga Mundo.
1 Dhalashada Wundo Mundo, waa ifafaale u gaar ah
1.1 Goorta la tagayo iyo sida loo tago
1.2 Wadada socodka ee isha wabiga Mundo
2 Wadada Mundo wabiga
Dhalashada Wundo Mundo, waa ifafaale u gaar ah
Sidaan kuu sheegnay, wabiga Mundo wuxuu ku dhashaa buuraha Alcaraz. Gaar ahaan, waxay ka baxeysaa god aad u qoto dheer. Waxaa laga garanayaa meeshan laba iyo soddon kiilomitir. Dhanka kale, godka ayaa ku yaal dusha sare ee buurta dheer.
Fasal dhagaxani wuxuu leeyahay meelo bannaan oo biyo ay dhex maraan. Sidaas darteed, ka Diyaarad wabiga Mundo waxay ku dhacdaa qaab biyo-dhac inta ay sameysanayso lagoonno. Kuwaas, waxay ka soo baxdaa socodkeeda. Aragtida ka bixitaanka biyaha iyo soo degitaankiisa ee dhirta dhexdeeda waa muuqaal gaar ah.
Goorta la tagayo iyo sida loo tago
Waqtiga kuugu fiican ee aad ku arki karto isha wabiga Mundo ee sharaftiisa oo dhan waa primavera. Kadib diyaaradda biyaha waxay la soo baxeysaa awood cajiib ah dhacdo caan ah oo loo yaqaan "daadinta."
Si aad u tagto meesha webiga ku dhasho, waa inaad isticmaashaa gaariga. Tan iyo markii Riopar, waa inaad qaaddaa wadada aadaya Haddii ay. Qiyaastii lix kiiloo mitir kadib waxaad heleysaa leexashada ku socota isha. Waad gaari doontaa tan markaad safarto laba kiilomitir oo kale. Ha ka welwelin baarkinka maxaa yeelay waxaad leedahay a la dhigto awoodna u leh boqol baabuur iyo lix bas. Laakiin, markaad aragto isha, waxaad wali haysataa waxyaabo badan oo aad ku booqato inta lagu gudajiro wabiga Mundo.
Wadada socodka ee isha wabiga Mundo
Waxa ugu horreeya ee aan dooneyno inaan kugula talinno waa inaad sameysid waddadan socodka ah ee quruxda badan. Qeyb ka mid ah isla meesha uu webiga ku dhasho oo dhererkiisu yahay ilaa toddobo kiiloomitir. Si kastaba ha noqotee, marinku ma fududa maxaa yeelay wuxuu ku socdaa dherer dhan XNUMX mitir waana uu leeyahay halista qaar.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad go'aansato inaad sameyso, waad la yaabi doontaa muuqaalka ay ku siineyso. Xaqiiqdii, waxay ku socotaa iyada oo loo marayo Calares del Mundo iyo La Sima Natural Park. Intaa waxaa dheer, marinku wuxuu gaaraa afkiisa godka uu maro webiga Mundo. Si tan loo sameeyo, waxaad u baahan doontaa ruqsad gaar ah oo waliba kuu oggolaan doonta inaad gasho illaa XNUMX mitir adiga oo aan u baahnayn qalab daloola. Laakiin waligaa ha isku dayin inaad intaas ka sii fogaato. Tani waxay kaliya ku habboon tahay xirfadlayaal federaal ah.
Si kastaba xaalku ha noqdee, marinku waa u qalantaa. Waxaad arki doontaa meelihiisii ​​oo kale Calaa aduunka, plateau leh godad biyo mareenno fara badan oo ay biyuhu ka soo shaandheeyaan godka. Mar dambe, godan ayaa eryi doona, taasoo keeneysa ilaha wabiga Mundo. Waxa kale oo aad ku arki doontaa gorgor, gorgor iyo noocyo kale oo deegaanka ah.
Wadada Mundo wabiga
Kaliya maahan isha wabiga Mundo waa qurux. Sidoo kale waa u qalantaa inay sii wado safkeeda ilaa ay ka dhamaaneyso Segura. Dalxiiskan ayaa maraya magaalooyin aad u qurux badan kuwaas oo aan haddaba idinkala hadlayno.
Magaaladan yari waxay haysaa dhaxalka taariikhiga ah ee taariikhda gobolka oo dhan. Dhexdeeda, waxaan kugula talineynaa inaad booqato hadhaaga qalcaddii-qalcaddii Xilligii Muslinka iyo kaniisadda ruuxa quduuska ah, oo la dhisay qarnigii XNUMXaad, laakiin gebi ahaanba la soo celiyey waxayna leedahay frescoes Gothic.
Sidoo kale, waxaad ku arki kartaa Riópar the Matxafka Warshadaha Royal ee San Juan de Alcaraz. Waa markhaati nool oo ku saabsan warshadaha naxaasta iyo naxaasta ah ee magaalada ku yaallay intii u dhaxaysay qarniyadii XNUMXaad iyo XNUMXaad kuwaas oo lagu abuuray amarka boqorka. Charles III.
Waxay ku taalaa degmada Molinicos, Degmadan waxaa si sax ah loogu yiqiinay Ríomundo. Waxay ku taalaa jawi dabiici ah, oo leh geedo fara badan iyo boqoshaada. Intaas waxaa sii dheer, waxay noqon doontaa wax aad u wanaagsan in lagu dhex socdo jidadkeeda gaarka ah ee caadiga ah oo aan arko dharkiisii ​​hore
Inbadan waxay ku xiran tahay degmada Isso, oo ah magaalo yar oo ku taal dhinaca bidix ee webiga Mundo. Dhexdeeda, waad booqan kartaa kaniisadda Santiago Apóstol, oo la dhisay qarnigii siddeed iyo tobnaad oo ay ku taal sawirka ilaaliyaha Isso, iyo Munaaraddii Almohad ee XIII ee ka koobnaa qalcaddii maanta waa la waayey.
Laakiin, wixii ka sarreeya, waxaan kugula talineynaa inaad aragto waxyaabaha ka duwan buundooyinka ka gudba wabiga. Waxaa dhaqan ahaan loo tixgeliyey Roman, sikastaba ha noqotee waa goor dambe. Laakiin, si kastaba xaalku ha ahaadee, waxay qayb ka yihiin muuqaal qurux badan.
Sidoo kale loo yaqaan «The Serrana Jewel», magaaladani waa goob xajka loogu talagalay dadka filimada jecel 'Sunrise, taas oo ah wax yar', maaddaama qayb ka mid ah lagu toogtay jidadkeeda. Laakiin sidoo kale waxay leedahay qodobo kale oo xiiso leh, oo ka bilaabanaysa jidadkeeda cidhiidhiga ah ee xiiran.
Waxaad booqan kartaa Kaniisadda Parish of Assumption, oo la dhisay qarnigii XNUMXaad. Gudaha, waxaad sidoo kale arki kartaa wax cajiib ah xubin baroque ee XVII. Waxa kale oo aad geli kartaa hoosta Mora Arch, oo leh halyeey u gaar ah oo ku saabsan sixirka; booqo biyo-mareenka iyo mashiinnada hidda iyo u dhowaanshaha Aragtida Híjar, oo ku siineysa aragtiyo qurux badan oo ku saabsan buuraha Albacete.
Ugu dambeyntiina, waxaan kaaga warrami doonaa magaaladan oo waliba ahayd goobtii lagu soo sheegay filimka aan soo sheegnay. Intaa waxaa dheer, waxaad ka arki kartaa waxa ku jira kaniisadda Santiago Apóstol, kaas oo ah Goob Xiiso Dhaqameed leh oo ay kuyaalaan Espino Chapel qurux badan; ah Hermitage of Our Lady ee Beytlaxam, oo leh qalabkeeda quruxda badan ee polychrome, iyo Kaniisadda iyo Kaniisadda Karmel ee la kala gooyay, oo la dhisay dhammaadkii qarnigii XNUMXaad.
Gabagabadii, the isha wabiga Mundoin Castilla-La Mancha, wuxuu ku siinayaa muuqaal dabiici ah oo qurux badan. Laakiin hareeraheeda sidoo kale waxay mudan yihiin booqashadaada dhaxal ahaan taariikhi ah oo qiimo leh iyo qiimaha bey'adeed ee weyn. Miyaadan rabin inaad ogaato aagga?
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Getaways » Isha wabiga Mundo